Armenia oo shaacisay inay diyaar u tahay xabad-joojin ay la gasho Azerbaijan | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Armenia oo shaacisay inay diyaar u tahay xabad-joojin ay la gasho Azerbaijan
Kooxaha gooni u goosatada ah ee gobolka Nagorno-Karabakh ayaa ciidmaada Azerbaijan ku eedeeyey in ay weerar culus oo gantaalo ay u adeegsadeen ay Sabtidii ku soo qaadeen magaalada madaxda gobolkaas.
Afhayeen u hadlay ciidamada Karabakh ayaa sheegay in Azerbaijan ay dagaalkaas u adeegsatay diyaaradaha dagaalka, kuwa aan duuliyaha lahayn iyo taangiyo balse ay iska caabbin kala kulmeen dagaal-yahannada gooni u goosatada ah.
Weerarka ayaa yimid toddobaad kaddib markii dhinacyada uu khilaafku ka dhexeeyo ay hubka cul-culus is waydaarsadeen.
Dagaalkaan ayaa ah kii ugu xumaa ee dhex mara labada dal tan iyo sagaashameeyadii, arrintaas oo kordhin karta khatar ah in dagaallo kale ay gobolkaas ka qarxaan. Waxaana jira walaac isa soo taraya kaddib markii dalalka Ruushka iyo Turkiga ay ku lug yeesheen dagaalka ka socda Koonfurta Qooqaas oo ay dhex maraan dhuumaha shidaalka iyo gaaska ee aada suuqyada caalamiga ah.
Wadahadalo ku saabsan xasaradaha siyaasadeed ee ka alloosan dalka Armenia ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inay ka qabsoomaan caasimmadda dalkaasi ee Yerevan.
Armenia oo shaacisay inay diyaar u tahay xabad-joojin ay la gasho Azerbaijan was last modified: October 4th, 2020 by Admin
Trump oo kala diraya guddiga la tacaalidda coronavirus mareykanka